Ibu Ibu kacha ọhụrụ Posts site Udi site na WordPress NchNhr iji jQuery ibu | Martech Zone
Ibu Ibu kacha ọhụrụ Posts site Udi site na WordPress NchNhr iji jQuery ibu
Wenezdee, Jenụwarị 9, 2013 Wenezdee, Machị 18, 2015 Douglas Karr
Y’oburu n’ichoputala otutu blog di ebe ahu dika Mashable. Iji hụ na ibe anaghị eburu ebighi ebi, ha na-ebufe ọdịnaya ahụ na Ajax… ma buru ya ụzọ mgbe peeji ahụ zuru ezu.
Anyị chọrọ ime otu ihe ahụ Martech Zone. Iji nye ụfọdụ nghọta na edemede na anyị nwere, Achọrọ m igosi ụfọdụ posts n'ime nke ọ bụla. Anyị maara nke ọma na WordPress, WordPress API na jQuery mana ọ bụ rue mgbe m chọtara otu isiokwu na Etchọta Ozi site na Otu iji jQuery na anyị nwere ọmarịcha azịza.
Ihe nkuzi a na - eme onye ọrụ site n’inwe ihe ndebiri iji webata ihe na ntanetị, yana otu esi ewu njikọ nwere ike ibido arịrịọ ahụ. Ọ ga-adị mfe ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịme njikọ ụfọdụ, mana anyị chọrọ n'ezie iji WordPress 'wuru na menu nhọrọ. O di nwute na anyi, njiko menu nke WordPress emeputala onu ogugu dika ị gbakwunye ma wepu ihe menu… mana ha enweghi ozi obula banyere udi ichoro ikwusi ma gafere na oku Ajax gi.
Iji denye aha ndepụta menu nke ọma, anyị webatara koodu ahụ site na WPreso, Tinye peeji / post slug klaasị na klaasị ihe menu.
Naanị otu nsogbu… ọ na-arụ ọrụ maka ibe ma ọ bụ biputere, mana ọ rụghị ọrụ maka Otu! Ya mere, anyị emelitere arịrịọ maka slug na:
$ slug = get_cat_slug ($ id);
Ma gbakwunye ọrụ ahụ site na WPRecipes, WordPress aghụghọ: Nweta ụdị slug site na iji NJ edemede, iji dọghachi ụdị ụdị ahụ n'ime àgwà data na menu igodo.
So… thanks to the collaborative efforts of 3 WordPress saịtị na ụfọdụ ezi-n'iji ya gee ntị site anyị jQuery guru na DK New Media, Stephen Coley (maka ịmegharị menu), anyị nwere sistemụ menu nhọrọ dị oke mma!
Tags: udi slugọhụrụ posts site na udiajụjụ_postswordpress ajax menuwordpress ajax submenumenu menuWordPress menu menuwp_nav_menu
Whitepaper: Omume kachasị mma maka Ide ederede Nzuzo
The History of Ahịa Technology
Jan 28, 2013 na 2: 07 AM
You na-egosi ma ọ bụ ree koodu a n’otu ebe? Anọ m na-agbalị ime ka ọ rụọ ọrụ mana enweghị m ike ịchọpụta otu esi etinye na wp_nav_menu na onye na-agagharị…
Jan 28, 2013 na 9: 45 AM
@ facebook-526543707: disqus Ejikọtara m na koodu m ji. Kedu ihe ị na-achọ ịgbanwe?
Jan 29, 2013 na 4: 57 AM
Daalụ maka azịza ya :). Ọfọn ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ụdị nke mbụ m, mana naanị maka nke a, enweghị m ike ịchọpụta etu m ga-esi megharịa usoro maka ngalaba ngalaba ọ bụla (ọkwa 2 nke menu m), na ịkwụsị ya ịrụ ọrụ na ọkwa 1 nke menu m: /
Feb 4, 2013 na 6:46 PM
Izọ m mere ya bụ ịgbakwunye ihe data dị na ndepụta ndepụta menu wee tinye ihe ahụ n'ọrụ na njụ-ajụjụ ahụ.
Feb 24, 2013 na 12:42 PM
Daalụ, elegharawo m anya, ọ na-arụ ọrụ ugbu a 🙂
Mar 17, 2015 na 11: 07 AM
enweghị m ike ịchọta koodu ọ bụla maka ojiji
njikọ mbụ anaghị arụ ọrụ
Mar 18, 2015 na 12: 33 PM
Emelitere m njikọ ahụ na ihe atụ ọhụrụ - mee ka m mara ma nke ahụ ọ na-arụ ọrụ.
Apr 12, 2021 na 1: 47 PM
Ndewo ebe ahụ! Nke a bụ kpọmkwem ihe m na-achọ maka ọrụ ọhụụ. Ohere ọ bụla ịkekọrịta koodu ahụ?